विवाह भन्दा खर्चिलो व्रतबन्ध ! | Alagdhar
घरBanner Newsविवाह भन्दा खर्चिलो व्रतबन्ध !
गोदावरी: मौलिक रीतिथिति र संस्कृतिमा धनी मानिएको नेपाली समाजमा सकी नसकी त्यस्ता परम्परा धान्नै पर्ने मान्यता छ । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ कि पहरी जातिमा विवाह भन्दा पनि व्रतबन्ध खर्चिलो हुने गर्छ । परम्परा धान्ने नाममा कतिपयलाई ऋण नै खोज्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याउँछ । धेरैले घरखेत बन्धकीमा राखेर परम्परा धानेका हुन्छन् ।
गोदावरी नगरपालिका वडा नं ४ बडिखेलका ५५ वर्षीय नरबहादुर पहरीका नाति आशीषको ११ वर्षको उमेरमा व्रतबन्ध हुँदैछ । नरबहादुरले नातिको व्रतबन्धमा ३०० जना साथीभाइ, नातागोता र आफन्तलाई निमन्त्रणा गर्ने योजना बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार व्रतबन्धमा निमन्त्रणा गरिएकामध्ये २५ जना महिलालाई पछ्यौरा र चोलो, अनि २५ जना पुरुषलाई ७ हातको फेटा र टोपी बाँड्नै पर्ने चलन छ ।
नरबहादुरले भन्नुभयो – “बाजामा ३० देखि ५० हजार रुपैयाँ जति खर्च हुन्छ । घरका हरेक सदस्यलाई नयाँ लत्ताकपडा हालिदिनुपर्छ । चौध थरिका गेडागुडी भिजाएर सितन बनाउनुपर्छ । स्वस्थानी व्रतकथाको अन्तिम दिन देवालीमा व्रतबन्ध गर्ने चलन हुँदा अनिवार्य हाँस, कुखुरा, बोका र कुमारीपाठीको मासु चाहिन्छ । सगुनमा जाँड, रक्सी, छ्याङ्ग, अण्डा, पान र माछा सबैको जोडजाम गर्न र भोज खुवाउन झण्डै ५ लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छु ।” बडिखेल घर भएका राजु पहरी र सरस्वती प्रहरीका ११ वर्षीय छोरा अजय पहरीको भोलि फागुन ७ गते व्रतबन्ध हुँदैछ । छोरोको व्रतबन्धमा ४०० जना साथीभाइ र नातागोतालाई उहाँ निमन्त्रणा गर्दै हुनुहुन्छ ।
व्रतबन्ध अघिपछि गरी लगभग एक हप्ताको भोज, तीन वटा खसी, दुई वटा हाँस, तीन वटा कुखुराको भाले, तीन बोरा चामलको जाँड, १०० लिटर रक्सी, बाजा र भाँडाकुँडा सबै गरी पाँच देखि साढे पाँच लाख रुपैयाँ जति खर्च हुने उहाँ अनुमान गर्नुहुन्छ । त्यसैगरी, बडिखेल निवासी ५४ वर्षीय अलैची पहरीका १३ वर्षीय नाति विकल पहरीको पनि भोलि नै व्रतबन्ध छ । अलैचीको डाक्नुपर्ने पाहुनाको सूची ६०० देखि ७०० जनासम्मको छ ।
उहाँले भन्नुभयो – “नजीकका पुरुष आफन्तलाई २०० वटा फेटा, टोपी र २०० वटा पछ्यौरा चोलो, धोती बाँड्नुपर्छ ।” दुई वटा पोथी हाँस, पाँच वटा कुखुराको भाले, एउटा कुमारीपाठी, ४ वटा खसी, ३० किलो कुखुराको मासु, बाजा, भोज र भाँडाकुडा किनमेलमा ६ देखि ७ लाख खर्च हुन्छ ।” नेपाली समाजमा आ–आफ्नो परम्परा र संस्कारअनुसार विवाह तामझामका साथ गर्ने चलन छ । कतिपयले आफ्नो हैसियत नभए पनि अरुलाई देखाउन कै लागि बढी खर्च गर्छन् । विवाहमा धेरैजसो मानिसको बढी नै खर्च हुने गर्छ । बडिखेलका पहरी जातिको व्रतबन्ध विवाह भन्दा पनि महङ्गो हुने गर्छ । पहरी परम्परा, संस्कृति र रीतिरिवाज नेवार समुदायको जस्तै देखिए पनि कुनै रुपमा मेल नखाने पहरी अग्रज दलबहादुर पहरीले बताउनुभयो ।
पहरीले हरेक वर्ष स्वस्थानी व्रतकथा समाप्तिको अन्तिम दिन देवाली गर्ने गर्छन् । यही देवालीमै उनीहरुको व्रतबन्ध गर्ने सदियौँ पुरानो चलन छ । पहरीको व्रतबन्धमा विवाहमा जस्तै विभिन्न प्रकारका बाजागाजा राख्नैपर्छ । यो जातिमा प्रेम विवाह गर्ने चलन बढी छ । हरेक बिजोर वर्ष छोरो नातिको व्रतबन्ध हुने गर्छ । यदि व्रतबन्ध गर्न आँटेको वर्ष कुनै छेकथुन भएमा अर्काे बिजोर वर्षमा छानिन्छ ।
पहरी जातिको घरमा हरेक महिनामा कम्तीमा एक वा दुईवटा चाडपर्व आई नै रहेको हुन्छ । बाँसको सामग्री निर्माण गर्ने यो जातिको पुख्र्यौली पेशा हो । बडिखेलका ६० प्रतिशत पहरीले बाँसको हस्तकला सामग्री निर्माण गरी आफ्नो दैनिकीका साथै चाडपर्व र परम्परा धान्दै आएका छन् ।
अघिल्लो लेखमाजिल्लामा शान्ती सुव्यवस्था र उत्खननको ब्यबस्थापन: एस पि पल्ली मगर
अर्को लेखमाप्रतिनिधिसभामा ‘लुट्न सके लुट’ बोलको गीत चर्चामा